Tetikasa fivarotana finday manomboka amin'ny taona 2009 | Martech Zone
Tetikasa marketing amin'ny finday manomboka amin'ny 2009
Alahady 4 Janoary 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
The Web 2.0 Summit no voalaza mialoha Search Marketing sy Marketing amin'ny finday dia ho lehibe amin'ny 2009. Nanana kafe niaraka tamin'ny namako aho, Adam Small, ny sabotsy ary ny azy Orinasa Marketing amin'ny finday eto Indy nanana fitomboana lehibe - indrindra tamin'ny telovolana farany. Ny ankamaroan'ny fitomboany dia nateraky ny fahamendrehana API ary ny fahaleovan-tena natsangany manodidina ny fampiharana ara-barotra amin'ny finday.
Ny lazan'ny roa amin'ireto mpampita vaovao ireto dia noho ny vidiny ambany dia ambany, ny fiatraikany avo lenta, ny fiantraikany azo refesina ary ny fahafahan'ny mpivarotra mampiditra sy manetsika ny fanentanana.
Mobile Marketing dia misy:
Hafatra an-tsoratra ary fanairana - noho ny fahafahany mifidy mifidy fahazoan-dàlana, mino aho fa hahatratra ny fitomboana matanjaka indrindra ny varotra finday miorina amin'ny SMS. Mampiasa ny fitaovan'ny findainy ireo olona ankehitriny ho toy ny 'sivana' ho an'ny fanafihana fandefasan-kafatra azony amin'ny alàlan'ny mpampita vaovao hafa.
Fangatahana finday - miaraka amin'ny telefaona iPhone, Blackberry Storm, ary Google Android mandeha matetika, fotoana tsara hananganana rindranasa na widget izay ahafahan'ny mpampiasa finday mifampiresaka amin'ny orinasanao na ny rindrambaiko amin'ny alàlan'ny telefaona. Tsy mila rindrambaiko mahery vaika, fampiharana… tadidio fa ny interface iray izay mandeha tsara amin'ny finday dia afaka mahazo anao amin'izay ilainao!
Marketing amin'ny Bluetooth - Marketing amin'ny Bluetooth dia varotra manelingelina sy miorina akaiky. Raha tsorina dia, if misy mpampiasa manana alalana Bluetooth ary mandeha ao anatin'ny toerana misy anao izy ireo, misy fampandrenesana azo alefa amin'ny telefaona. Mila fihomehezana tanana sy fidirana an-trano izany, saingy satria tsy nangataka ny fifandraisana ny mpanjifa dia tsy mpankafy aho.
Tsy ampidiriko fandefasana hafatra ao amin'ny fianakaviana 'marketing amin'ny finday', saingy mendrika ny hijerena ireo teknolojia tsy mampino toa an'i Vontoo. Amin'ny cusp teknolojia avo lenta dia misy ihany koa ny serivisy mampiasa ny fanekena feo toa serivisy antso ho an'ny fihaonambe Hey Otto!
Misaotra an'i Katie namoaka ny Fampisehoana Mobile Trendspotting ary nanery ahy hanoratra ity lahatsoratra ity!
Manome tsiny ny banky fa tsy ny mpanendaka
5 Jan 2009 amin'ny 12:55 PM
Ny marketing marketing Bluetooth dia manaitra ahy somary mampivadi-po tokoa. Izaho dia mitazona ny kilemako ho kilemaina ihany koa, noho ny trojan-javaolana blueberry izay manandrana manaparitaka olona tsy mendrika.
5 Jan 2009 amin'ny 5:53 PM
Mahaliana ny mahita izay mety hitranga amin'ny ho avy amin'ny marketing amin'ny finday. Miombon-kevitra aminao aho fa toa manahirana tokoa ny varotra Bluetooth, ary toa ny filazan'ilay mpitsikera etsy ambony, karazana mampatahotra.
Tamin'ny fikarohana nataoko tamin'ny finday, hitako ity lahatsoratra mahasoa ity momba ny mahasamihafa ny marketing amin'ny finday sy ny mcommerce. http://lunchpail.knotice.com/2008/12/22/101-m-commerce-or-mobile-marketing/